Waxaan u soo bandhigeynaa buugaagta waxtarka leh ee Jarmalka ee fasalka 9aad, fasalka 10aad iyo guud ahaan ardayda dugsiga sare. Waxaad si fudud ugu isticmaali kartaa buugaagtayada jarmalka, oo aan u diyaarinay E-Book, kumbuyuutarkaaga ama taleefankaaga gacanta.
Buuggeena Jarmalku maahan oo keliya buug dheeri ah oo loogu talagalay ardayda dugsiga sare, laakiin sidoo kale waa buug barashada Jarmalka oo loogu talagalay dadka bilowga ah si ay u bartaan Jarmalka.
Buuggeenna Jarmalka ee la yiraahdo Wir lernen Deutsch (WLD) waxaa loo isticmaali karaa buugaagta dheeriga ah ee Jarmalka ee ardayda fasalka 9aad, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa buuga Jarmalka ee ardayda fasalka 10aad maadaama ay sidoo kale ku jiraan maadooyinka fasalka 10aad. Xitaa waxaa loo isticmaali karaa inay tahay il waxtar badan oo wax ku ool ah oo loogu talagalay ardayda fasalada 11 iyo 12 ee asal ahaan Jarmal liita.
Marka laga reebo ardayda dugsiga sare, kuwa aan dhigan iskuul kasta ama koorso kasta oo Jarmal ah waxay si fudud u isticmaali karaan buuggeena barashada Jarmalka si ay iskood ugu bartaan Jarmalka. Buuggeenna waxaa lagu diyaariyey dad aan ku hadlin wax af Jarmal ah iyadoo casharrada Jarmalku ay ka soo bilaabmayaan meel hoose. Marka, kuwa ku cusub barashada Jarmalka ama kuwa aan aqoonin Jarmal kasta waxay awood u yeelan doonaan inay si fudud Jarmalka uga bartaan buuggeena.
MAWDUUCYADA BOOQASHADA KOORSAN EE Jarmalka
# MAWDUUCYADA BOOQASHADA KOORSAN EE Jarmalka
Tags: 10. buugga kooraska luqada ee german, 10. casharada alman ee fasalka, 10. fasalka nasiibka mawduuca, Buugga Jarmalka ee fasalka 10aad